Uhlelo Lokuphathwa Kwezakhiwo Zesikhathi Sangempela | Izici ze-Zeevou
Izici » Ukubika kwesikhathi sangempela
Noma ngabe ukuphi ibhizinisi - idatha ingukhiye. Ngeshwa, amabhizinisi amaningi ancike kumhlinzeki wesoftware ukuwasiza aqhube ibhizinisi lawo, ngoba imvamisa akubizi noma isikhathi esanele ukuzakhela elakho.
Amabhizinisi okungenisa izihambi nawo ahlukile. Ezimweni eziningi, idatha ibanjwa ku-database yi-Channel Manager yabo, i-Property Management System, noma i-Central Reservation System. Noma kunjalo, idatha ayitholakali ngaso sonke isikhathi ngefomethi yokusebenziseka kalula. Imvamisa ekuhlanganisweni kwezingcezu zolwazi eziwusizo kusuka kumongo webhizinisi ukusiza ukuqonda ukusebenza kwezici ezithile zenkampani, hhayi isithombe sonke.
Kungasiza Kanjani Ukubika Kwangempela Kwesikhathi SikaZouvou?
IZeevou yathuthukisa uhlelo lwayo Lokuphathwa Kwezakhiwo ngeReal-time Reporting. Lokhu kukuvumela ukuthi usebenze imibiko ehlukahlukene enezibalo ezinemininingwane. Umbiko ngamunye ungahlungwa ngokususelwa ezimeni eziningi. Abasebenzisi banganquma ukuthi yimaphi amakholomu abafisa ukuwabonisa, nokuthi alandelana kanjani. Idatha kaZeevou ingathunyelwa futhi ilandwe nganoma yisiphi isikhathi njenge-CSV noma i-XLSX.
IZeevou inikeza imibiko ehlukahlukene yezezimali - kusuka emibikweni yama-invoice kuya ezinkokhelweni, nokubuyiselwa kwemali. Siphinde futhi sinikeze ukuhlaziywa okwakhelwe ngaphakathi kokuthengisa, amazinga okuhlala, nokubhuka. Abasebenzisi abakwazi ukurekhoda kuphela umholo wabo kepha nezindleko zabo. UZeevou usesimweni esiyingqayizivele sokukwazi ukunikeza izibalo zenzuzo ezenzakalelayo ngokuphelele kubo bobabili ababungazi nabatshalizimali ngesikhathi sangempela. Lokhu kuvumela abaxhasi bethu ukuthi babe nokuhlola okuphelele kokusebenza kwebhizinisi labo emazingeni ahlukahlukene.
Ukubika kwezinsizakalo zamakhasimende
Ukubika kwethu kwesikhathi sangempela akugcini nje ekuphathweni kwezezimali, ukubalwa kwezimali nokuphathwa kwemali engenayo. Sithuthukise nemibiko eminingi yokusebenza engatholwa abasebenzisi bethu, abasebenzi babo, nezinkampani ezithunyelwa ngaphandle. Lokhu kuvumela ukuxhumana ngemininingwane phakathi kwababambiqhaza kalula, nokwenza imisebenzi ibe lula kusuka ekungeneni, ekugcinweni kwezindlu, nasekulondolozweni.